Hebei Jinmai Kukanda Co., Ltd ichatarisira The 124th Canton Fair - China Hebei Jinmai vachikanda
Hebei Jinmai Kukanda Co., Ltd ichatarisira The 124th Canton Fair
The 124th Canton Fair ichaitwa muna Guangzhou musi October 15, 2018.
Hebei Jinmai Kukanda Co., Ltd. ndiye aitungamirira mugadziri ari nyore kufurirwa simbi nyere chakakodzera indasitiri.
mutopota yedu Fittings kunge inini zvakaoma unhu inspections. Nhatu dzakasiyana dzinoti zviri maererano BS Standard NPT uye Din Standard.
Kupfuura kwemakore 30 kugadzirwa ruzivo, aivigirwa kunyika dzinopfuura 40 pasi pose. Product Unhu kwave kuchizivikanwa nenyika!
Welcome vatengi zvitsva nezvitsaru kushanyira dumba yedu kuziva zvinhu zvedu uye fekitari
Post nguva: Aug-07-2018